Daily Hope Monday March72011
ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေဟု ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ (လု ၈း၈)
ဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကပြောသည်။ ဘာကြောင့်လဲ? သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိရန် ဖန်ဆင်းထားသည်။ သင်တည်ရှိနေရခြင်းသည် အားလုံးသောအကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သင်တို့တွေ သူ့ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိစေခြင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း မရှိဘဲနှင့် အဆက်အသွယ် လုပ်၍ မရနိုင်ပါ။ ပြဿနာက ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည် အလွန် လွယ်ကူစွာ အထင်လွှဲခံရသည်။ ကျွန်တော်သည် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာ ၃၅ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ၊ ကျွန်တော် သူ၏အသံကိုအမြဲ တန်းမကြားပါ။ သို့မဟုတ် နားလည်သဘောမပေါက်ပါ၊ ကျွန်တော် ၃၅ နှစ်အတူနေခဲ့သူကို နားလည်သဘောပေါက် သည်မရှိသော်၊ ကျွန်တော် ဘယ်လို ဘုရားသခင်၏စကားအမှန်ကိုကြားနိုင်မည်နည်း။ ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း?
ဒါသင့်ကို အံ့အားသင့်ွေယ်ဖြစ်မည်။ လူအတော်များက သင်းအုပ်ဆရာသည် ဘုရားသခင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် လိုင်းရှိမည်ဟုထင်ကြသည်။ အမှန်တကယ် တခါတလေ ကျွန်တော် အခုတင် စိတ်ရှုပ်သောအရာဖြစ်သည်။ သင်ဘုရားသခင် စကားကိုနားထောင်နေစဉ်၊ အခါတိုင်း ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိပါ၊ မည်သူထံမှထူးခြားသောအကြောင်း မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တောါပြောပြမည်၊ ဒါသက်သာစေသည်။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာ ၃၅ နှစ်ရှိပြီးတော့၊ ကျွန်တော်မိန်းမ၏အသံကို တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာ မှတ်မိသည်။ သူကိုယ်တိုင်မ ပြောဘဲနှင့်၊ အကယ်၍နိုင်ငံခြားဖြစ်လို့ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသော်လည်းသိ သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်တာ ၄၅ ကြော်လာ၍ ကျွန်တော်သူ့အသံကိုသိသည်၊ ကျွန်တော်နှင့်ပြောသည့်အခါ။
သင်ကြာရှည်ဆက်သွယ်မှု ဘုရားသခင်နှင့်ရှိလျှင်၊ သူပြောတာသိရန်လွယ်ကူလာသည်။ သော့ချက်ကတော့ သူ့အသံကို ဖမ်းနိုင်၇န် သင်ယူရကြမည်။
သခင်ခရစ်တော်က လု ၈း၈ မှာပြောသည်မှာ “ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေ” ဘုရားသခင်က သင်ကို ကြားနိုင်မည် ကရိယာများ သင့်ကိုပေးထားသည်။ နောက်သိတ်မကြာခင်၊ ကျွန်တော်တို့သူ့အသံကို ဘယ်လိုဖမ်းယူရကြမည်ကိုသိကြလိမ့်မည်။